Izinsiza zethu - Tianjin Goldensun Steel Co., Ltd.
Samukela abathengi ezingaba ukuxhumana nathi.
usekelo lwe-imeyili goldensun001@goldensunsteel.com
steel UMLANDO WAKHE OMFUSHANE
isihlonzi sesethi yezinsiza
Aluminum UMLANDO WAKHE OMFUSHANE
UKUKHANYA STEEL Keel
BUKA KONKE IMIKHAKHA
Umkhiqizo ngamunye senziwa ngokucophelela, kuzokwenza wanelisekile. Imikhiqizo yethu enqubeni ukukhiqizwa safike ngokuqinile elibukhali, ngoba kuphela ukukunikeza nqampuna umhlabeleli, thina uyozizwa uqiniseka. izindleko zokukhiqiza High kodwa amanani aphansi ngokubambisana yethu yesikhathi eside.
Elikhulu amakhasimende base emhlabeni
iminyaka engu-15 yokukhiqiza isipiliyoni kusukela ngo-2005, abangu-12 eminyakeni engu-professional ukuthekelisa nakho kusukela 2007. Ufunde 48 nemibukiso zasekhaya nakwamanye amazwe babebambisene ikhasimende eziningi ngomusa. Uthumela zithunyelwe emazweni angaphezu kuka-60, eNingizimu-mpumalanga Asia, Middle East, I-Afrika nesifunda, eMelika Ephakathi naseNingizimu Melika esifundeni njll
Sigcina isitokwe futhi imikhiqizo emisha zonke ngonyaka, ngakho noma kunini uma ukwenza umyalelo thina kuyoqinisekisa isikhathi kwezidingo. Phakathi naleso sikhathi, uzogcina izinga eliphezulu kakhulu kungakhathaliseki ekukhiqizeni noma amasheya.
Sithemba ukuba ubambisane amakhasimende amaningi ekuthuthukiseni mutual kanye nezinzuzo.